बाढीका कारण दाङमा आन्तरिक नाकाबन्दी : अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव ! - Naya Patrika
बाढीका कारण दाङमा आन्तरिक नाकाबन्दी : अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव !
भुपेन्द्र वली , दाङ | साउन २९, २०७४
अविरल वर्षाका पछि आएको बाढीले जिल्लाको यातायात सेवामा अवरोध पु¥याएपछी दाङमा आन्तरिक नाकाबन्दी भएको छ । दर्जन बढी खोलामा आएको बाढीका कारण सवारीसाधन दुई दिन यता ठप्प जस्तै भएका छन् । जिल्लाका मुख्य शहरहरु घोराही — तुलसीपुर र लमही एकअर्कासँग सम्पर्क विच्छेद भएका छ भने बाह्य जिल्लासँगको सम्पर्क पनि टुटेको छ । बबई , सिस्ने ,सिस्ने , कटुवा , गुर्जे , पत्रे , संक्राम , ग्वाँर लगायतका खोलामा समयमा पुल नबन्दा यात्रुले यसवर्ष पनि समस्या व्यहोर्नु परेको हो ।
यस्तै दाङबाट रोल्पा , सल्यान जाने सवारी साधनमा पनी अवरोध भएको छ । व्यवसायिक लगायत अन्य कामका लागि आवतजावत गर्नुपर्ने यात्रुले २ दिन यता एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ जान पाएका छैनन् । वर्षा र बाढी कम नहुँदासम्म यातयात सञ्चालनमा आउने अवस्था नरहेको राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष सुरेश हमालले बताए । शुक्रवार राती देखी परेको अविरल वर्षाका कारण आएको वाढीले घोराही तुलसीपुर सडक अन्तर्गत हातीखौवा र मोतिपुरबीचको सोताको कल्भर्ट बगाएपछि अवरुद्ध भएको सड्क अझै सुचारु हुन सकेको छैन । सो स्थानमा ह्युमपाईप राखेर बाटो सुचारु गर्ने प्रयास गरिएपनि बाढीले ह्युम पाईप नै बगाईदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले बताए । वर्षा कम भएसँगै सो स्थानमा ह्युमपाईप राखेर सडक सुचारु गरिने श्रेष्ठले बताए ।
अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव
यातायात सेवा ठप्प भए पछि जिल्लामा अत्यावशकिय सामाग्रीको अभाव देखिन थालेको छ । दुग्ध, पेट्रोलियम पदार्थ र तरकारीजन्य सामाग्रीको अभाव शुरु भएको यहाँका व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यातायात ठप्प भएपछि गाँउबाट दुग्धजन्य पदार्थ र तरकारी शहर नआएको एक व्यवसायीले बताए । यस्तै जिल्लामा यातायात सेवा ठप्प भएपपछि बिरामीहरुलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ । एम्बुलेन्सहरु सञ्चालनमा आउन पाएका छैनन् भने वर्षा यसरी जारी रहे औषधिको पनि अभाव हुने भएको छ ।
४ सय बढी घरधुरी विस्थापित
जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले आइतबार साँझसम्म दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म दाङ ४ सय १४ घरधुरी विस्थापीत भएका छन् । यस्तै चार सय बढी घर बाढीको डुबानमा परेका छ । भने २ जनाको शनिबारको बाढीमा परी मृत्यू भइसकेको छ । मृत्यू हुनेमा तुलसीपुर १३ की ४८ वर्षिय भगवती सुनार र तुलसीपुर ४ का ५८ वर्षिय नरबहादुर रावत रहेका छन् । बाढीका कारण जिल्लामा ४ सय बिघा जमिन कटान भएको छ भने २० मिटर बाटो भत्किएको छ । विस्थापितहरु लाई विद्यालय , स्वास्थय चौकी लगायतका स्थानमा आश्रय दिएर खाना खाने व्यवस्था समेत मिलाईएकोे प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।